Apple ayaa joojisay saxiixa macruufka 14.7 | Wararka IPhone
Ragga ka yimid Cupertino ayaa sii daayay macruufka 14.7.1 usbuucii la soo dhaafay, noocaas oo ku dhawaad ​​suurtagalnimada oo dhan noqon doonta cusboonaysiinta ugu dambaysa ee la helo macruufka 14. Markii la sii daayay macruufka 14.7.1, nuqulkii hore ayaa maalmihiisu tirsanaayeen. Waxaa la yiri oo la dhammeeyay, Apple waxay joojisay saxiixa macruufka 14.7, oo ah noocaas hagaajiyay isticmaalka batteriga xad -dhaafka ah ee macruufka 14.6 taasna waxaa lagu celceliyay macruufka 14.7.1.
iOS 14.7.1 wuxuu ahaa casriyeyn yar oo hagaajisay dhowr nuglaansho xagga amniga ah. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale saxday Furaha furitaanka Apple Watch ee adeegsadayaasha iPhone ee leh Aqoonsiga Taabashada. Cusboonaysiintaan ayaa la sheegay inay ku dhegan tahay dhiig-miirashada maalin-eber-ka ah ee ay adeegsato NSO's Pegasus spyware.
Aniguna waxaan u malaynayaa sababta oo ah Apple wax faallo ah kama uusan bixin. Waxa ugu xun ee ku saabsan softiweerka Pegasus ayaa ah in haddii nuglaanta eber-ka ah ee laga heli karo macruufka 14.7 dhab ahaan la dhajiyay, waxay bilaabi doonaan isticmaal nuglaansho kale isku nooc ah oo aad hore uga iibsatay khubarada amniga ee soo ogaata oo u arka inay aad uga faa'iido badan tahay in laga iibiyo shirkadda noocan ah marka loo eego shirkadda lafteeda.
Dhibaatada u nuglaanshaha maalinta-eber-ka ah ayaa ah in laga helo nidaamka hawlgalka laga soo bilaabo nuqulkii ugu horreeyay oo aysan abuurayaashu ka warqabin. Adigoo aan garanayn jiritaankeeda, sinaba uma dhejin karaan ilaa ay ogaadaan sida looga faa’iidaystay.
IPhone ma aha mid aamin ah sida Apple sheegtay
Ka dib markii la ogaaday adeegsiga ay shirkadda NSO ka samaysay Pegasus aalad kasta oo moobil ah, oo ay ku jirto iPhone -ka, aan aragno sida Apple ay ugu qiil siin karto mas'uuliyiinta beerta darbiga leh ee Dukaanka App -ku waxay tusaysaa amniga isticmaalaha in gabi ahaanba qofna boodi karin.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto in taleefankaaga casriga ahi uu ahaado mid sugan, waxa ugu fiican ee aad samayn karto waa cusboonaysii nooca ugu dambeeya ee la heli karo mar walba.
Haddii aad tahay siyaasi, saxafi, dhaqdhaqaaqe ama aad leedahay hawl qabta macluumaadka halista, waxa ugu fiican ee aad samayn karto waa adeegsiga Signal, in kastoo haddii aan xisaabta ku darsanno Pegasus waxay heli kartaa dhammaan waxyaabaha ku jira aaladdaSidoo kale waa wax aan waxtar lahayn oo ikhtiyaarka kaliya ee noo haray ayaa ah inaan ku laabanno habkii hore ee xarfaha ama, haddii aan taas dhicin, fakiska haddii macluumaadka aad rabto inaad la wadaagto uu yahay mid degdeg ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 14 » Apple wuxuu joojinayaa saxiixa iOS 14.7